Red Carpet ကို sneaker စီးပြီး fashion ကျကျပွဲတက်လာတဲ့ Millie Bobby Brown – FemaleWear.net
Red Carpet ကို sneaker စီးပြီး fashion ကျကျပွဲတက်လာတဲ့ Millie Bobby Brown
အသက် ၁၃နှစ်သာရှိသေးတဲ့ မော်ဒယ်ဆိုလည်းဟုတ်၊ မင်းသမီးချောလေးလည်းဖြစ်တဲ့ Millie Bobby Brown ကတော့ SAG Awards ကို ချစ်စရာကလေးတစ်ယောက်သဖွယ် ပွဲတက်လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ ဟန်ပန် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပုံစံလေးနဲ့ သူမရဲ့ပွဲတက် fashion ကိုလည်း လူအများက သတိထားမိခဲ့ကြပါတယ်။
Hand game strong ?? thanks to @essiepolish ?? and @repossi jewels ✨ #EssiePartner #RepossiPartner
သူမဝတ်ဆင်ထားတဲ့ fashion ကတော့ sequined ထိုးထားပြီးရိုးရှင်းတဲ့ပန်းနုရောင် dress လေးကိုဝတ်ဆင်ပြီး Converse က sneaker အဖြူကိုစီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Hair style ကိုတော့စံထုံသေးသေးလေးနှစ်ဖက်ကိုဖဲကြိုးနက်နဲ့စည်းထားပါတယ်။သူမရဲ့ပြင်ဆင်ထားပုံကရိုးရှင်းပေမဲ့ငယ်ရွယ်တဲ့အလှနဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်ရင်တော့မျက်စိကျလောက်အောင်ချစ်စရာကောင်းနေတာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Good night!??????? #milliebobbybrown #strangerthings
A post shared by Millie Bobby Brown ♡ (@stranger_milliebbrown) on Jan 22, 2018 at 4:27pm PST
ပါးလွှာလွန်းတဲ့ အသားကပ်ဘောင်းဘီတွေကို အခက်ခဲမရှိအောင် ဝတ်ဆင်နည်းများ